Version 0.6.7 – Kedu ihe bụ ọzọ?
December 18, 2010 site na rịọ 23 Comments
Kedu ihe na-esote nke Transposh?
Ụnyaahụ anyị wepụtara version 0.6.7. Nke a na-agụnye version ole na ole obere fixes, ma n'ihi na ike ịsụgharị ọzọ kwuo okwu mgbe google anaghị chọpụta isi iyi asụsụ n'ụzọ ziri ezi, na ike na-agụnye kpọmkwem njikọ n'ezie faịlụ (ndị ga-eme ka a 301 ébé na-erukwa).
Otú ọ dị ihe ọzọ dị mkpa bụ na anyị akpatre ike cleanup anyị milestones, na ịtọ Kwadobe ke zuru ukporo maka ọzọ isi version nke Transposh – o ga- 0.7. Na-elekwasị anya na nke a version a ga-enwe isi mezie ka onye nsụgharị frontend interface, anyị emewo ihe ndị a chọrọ maka nke a online anyị mmepe na saịtị na http://trac.transposh.org/wiki/milestones/0.7. Onye ọ bụla nke chọrọ ime ọzọ version na-adara edezi na ịza ajụjụ ahụ wiki page ma ọ bụ mepụta otu tiketi anyị. Anyị ga-nyochaa onye ọ bụla arịrịọ ma gbalịa dabara ya nhazi oge.
Na ụfọdụ ndị ọzọ ozi ọma, ga-amasị anyị ka na-ekele Colnect, ọhụrụ anyị onye nkwado nke so ọhụrụ vps maka Transposh nke ga-Olileanya-eme ka saịtị na-aga a bit ngwa ngwa. Anyị nwekwara nwara iji cloudflare mma anyị ọrụ, Otú ọ dị anyị na-enwe klas ya pụta na-na, ma ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu ọ bụla na ịnweta saịtị a, biko mee ka anyị mara.
Akpatre ke burukwa, onye Alfa version anyị ngwa mgbakwunye maka Blogger bụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ị na saịtị na Blogger ma na-achọ ka ịgbakwunye translation ya, dị nnọọ ịkpọtụrụ anyị.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa, Software mmelite Akpado Na: 0.7, Blogger, google ntụgharị, isi, obere, tọhapụ, trac, WordPress ngwa mgbakwunye
Version 0.5.3 – Ike ịsụgharị URLs
June 1, 2010 site na rịọ 44 Comments
Ọhụrụ a version na-enye ohere urls na saịtị ahụ na-sụgharịrị ka e lekwasịrị asụsụ. Ga-amasị anyị na-ekele Hans si Cosmedia (a website banyere ịchọ mma nakwa ịwa agwọ ọrịa) n'ihi na sponsoring ọrụ mere banyere nke a mma, yana sponsoring a kwachie iji kwado omenala permalinks ngwa mgbakwunye. Ọ bụrụ na ị na-efu a mma, ike tiketi anyị na mmepe na saịtị anyị Aga gbakwunye ya na anyị todo ndepụta. Ọ bụrụ na ị chọrọ inyere anyị aka, sponsoring atụmatụ mmepe ga-enyere anyị aka ime ya eme ngwa ngwa, na obodo iji nweta ihe zuru ezu na ngwaahịa.
E nwekwara n'ihu ndozi gụnyere ndị dị otú ahụ dị ka eziokwu ahụ kwuru mere ka na-asụ asụsụ ndị dị iche iche ka ndabara onye na-akara dị ka ndị dị otú ahụ ma na-translatable na ndabara asụsụ (mkpa ka i kaa ịsụgharị ndabara asụsụ nhọrọ ke ntọala), mma akwado WordPress ibu dị n'ime oghere ngwa mgbakwunye, na obere kwalite ke jQueryUI version ji na-enyere aka na WordPress 3.0 na-abịa nkwado.
Ikpeazụ ihe a mara burukwa bụ na anyị chọrọ ka ị mara na anyị nwere na peeji nke anyị mmepe ebe anyị na ịnọgide na-enwe ọzọ plugins ndakọrịta ndepụta (na patches ọ bụrụ na achọrọ). Anyị wiki ngwa mgbakwunye support matriks page, dị ka a wiki, dị ike a onye ọrụ ahụ na saịtị ahụ na free idezi ma melite a.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: onyinye, obere, tọhapụ, A, trac, WordPress 3.0, WP-ibu-Áhàámá
Version 0.5.0 – Back elu
March 24, 2010 site na rịọ 7 Comments
Taa anyị wepụtara v0.5.0 nke bụ na isi mgbanwe na ngwa mgbakwunye dị ka ọ na-enye abụọ atụmatụ na e rịọrọ site ọtụtụ.
Onye mbụ bụ Nsonye nke ndabere ọrụ n'ime ngwa mgbakwunye. Ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ma aka akwado elu, nwere ndabere meere gị kwa ụbọchị ma ọ bụ ikwe ka ndabere na-eme ndụ. Ndabere bụ naanị mere ka ụmụ mmadụ na nsụgharị, na na na na nkwado ndabere na ọnọdụ, na ngwa mgbakwunye nnọọ eziga nsụgharị ọhụrụ na nkwado ndabere na mpaghara ọrụ.
Nke a na nkwado ndabere na mpaghara ozi na-agba ọsọ n'elu google appengine akụrụngwa, mere ya nnọọ ngwa ngwa na scalable.
Nke abụọ mma bụ uka sụgharịa owuwu, ugbu a gụnyere ke transposh ntọala peeji nke. Ị nwere ike dị nnọọ see “Asụgharịa niile Ugbu a” bọtịnụ na bụla na peeji nke na post ga-sụgharịrị ịbụ n'ihi na ị, jiri nwayọọ nwayọọ ma n'ezie. Rịba ama na nsụgharị e mere na ahịa n'akụkụ, na nkesa n'akụkụ na zuru ezu latency otú ahụ bụ adịghị atụ egwu gị na ihe nkesa ịṅụbiga na akpaghị aka nsụgharị ọrụ.
Ọzọ releases n'akuku 0.6.0 mbipute ga-elekwasị anya ọzọ na njirimara (nsụgharị) ahụmahụ na multi-lingual blog wrtiting integrations.
Gị echiche na-mgbe niile nabatara, dị nnọọ okwu ebe a ma ọ bụ na-aga trac.transposh.org.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: ndabere ọrụ, akara center, tọhapụ, trac, WordPress ngwa mgbakwunye
Na- “trac” anyị nmepe
December 11, 2009 site na rịọ Ahapụ a Comment
Ndewo ebe ahụ,
Ụzọ kasị mma na-enwe ọganihu dị na enyemaka nke obodo, anyị chọrọ ka onye obula mara ihe na-aga na ihe kacha mma enwere ike n'ụzọ na-esochi ihe anyị na-eme.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na onye chọrọ inwe ngwa nkwado na ina amara gị ọkwa banyere ọhụrụ happenings, na-eche na-eso anyị na twitter.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ ihe idem ke obodo, chọrọ inyere ndị ọzọ aka ma na-etu ọnụ banyere gị na saịtị na iji transposh, ugbu a anyị nwere na peeji nke on facebook.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe mmepe na-eme, maara banyere abịa atụmatụ tupu ha a tọhapụrụ na n'ozuzu na-amasị na-ebi na onu, soro anyị trac na saịtị trac RSS.
Ọ bụrụ na ị dị na-eso ọkwa na a na saịtị, na RSS akara (ma n'okpuru ma ọ bụ n'ụlọ nchọgharị gị okwu ahịrị) bụ enyi gị. Ị ga-enweta ihe a na ndepụta asụsụ ị na-ugbu a na-eji.
Comments mgbe niile nabatara oke (anyị na-agbalị ikwado dị ka ngwa ngwa ka anyị na-ike). Ọ bụrụ na i nwere ndị ọzọ aro / echiche / ndụmọdụ / witty post utu aha – dị nnọọ ka anyị mara.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: facebook, RSS, na-elekọta mmadụ, trac, twitter